သူမခဈြပဲ ကိုယျကပဲ ခဈြနရေတဲ့ ဒဏျတှကေိုမုနျးလာတဲ့အခါ …. – Shinyoon
သူမခဈြပဲ ကိုယျကပဲ ခဈြနရေတဲ့ ဒဏျတှကေိုမုနျးလာတဲ့အခါ ….
သူမချစ်တော့တာသိနေပြီပဲ .. လှည့်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါဆိုတာက စကားအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ကို လွယ်လွန်းတယ် ။ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာထက် အရင်တုန်းက သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက် ကိုယ့်အနား လာပြီး ရပ်နေသလိုပါပဲ ။
စကားတွေ ပြောပေမယ့်လဲ အသက်တွေမပါဘူး ။ ပြုံးပေမယ့်လဲ စိတ်ထဲမပါဘူး ။ အနမ်းတွေကအစ အရင်လို မနွေးထွေးတော့ဘူးလေ ။ သူ ကျွန်မကို မချစ်တော့မှန်း သိပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ဆက်ပြီး ဖက်တွယ်နေမိတုန်းပဲ ။
ဘာကြောင့်လဲ လို့မေးရင် …. သူမရှိတော့ရင်လို့တွေးမိတဲ့အခါ ကျွန်မ ဝမ်းနည်းရတယ် အဲ့ဒီတစ်နေ့ကို ကျွန်မ မဖြတ်သန်းနိုင်မှာစိုးတယ် ။ အခုအနားနားရှိနေလို့ကော ပျော်နေလားဆိုတော့ … သူရဲ့မပျော်ရခြင်းတွေကို မြင်နေရတဲ့ ကျွန်မ မပျော်ခဲ့ပါဘူး
ထွက်သွားချင် ထွက်သွားပါတော့ ဆိုပြီး လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပေးလိုက်ချင်ပေမယ့် နှလုံးသားက ခေါင်းမာတယ် ဟိုးအစကတည်းကနေ … တို့အတူ ဆိုပြီး မျှော်လင့်ချက်လေးထားခဲ့မိတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း လျှောက်မယ့်လမ်းတွေဟာ ပျောက်နေခဲ့တာပါ ။
သူ မချစ်တော့မှန်းသိပေမယ့် ဆက်ပြီးဆွဲထားဖြစ်နေဦးမှာပါ … တစ်နေ့ပေါ့ ကိုယ်တစ်ယောက် လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတွေ ဝင်လာတဲ့အခါ… သူမချစ်ပဲ ကိုယ်ကပဲ ချစ်နေရတဲ့ ဒဏ်တွေကိုမုန်းလာတဲ့အခါ …. လွတ်လပ်ပါစေတော့ဆိုပြီး သတ္တိတွေ ရှိလာတဲ့အခါပေါ့ …
သူ့ကို ခဈြရုံလေးပဲ ခဈြခဲ့မိတာမှ မဟုတျပဲလေ